PK မငျးသားကွီး အမီးရျခနျးရဲ့ ပညာသားပါတဲ့ ကိုဗဈအလှူ – Daily Feed MM
PK မငျးသားကွီး အမီးရျခနျးရဲ့ ပညာသားပါတဲ့ ကိုဗဈအလှူ
Admin_John | December 3, 2020 | Local News | No Comments
အိန်ဒိယနိုငျငံ နယူးဒလေီမွို့ကွီးမှာတဈကမ်ဘာလုံးက သိတဲ့Bollywood ရုပျရှငျမငျးသားကွီးအမီးရျခနျး(Aamir Khan) နထေိုငျသတဲ့။
သူက အရမျးလညျးခမျြးသာတယျဆိုပဲ။ အခုလို Covid ကာလမှာ သူကလူတှကေို ကွငွောသတဲ့။သူ ဂြုံကွမျးအထုပျကလေးတှအေမြားကွီးထုပျထားတယျ ၊လာယူကွပါလို့ ပွောသတဲ့။မွို့နလေူထုကလညျး အံဩသှားပွီးဝဖေနျမှု့တှမွေငျ့တကျလာ သတဲ့
” ဒီလောကျခမျြးသာတာဂြုံကွမျးမှုနျ့ပဲပေးတာလား?စတေနာမကောငျးဘူး…ပေးခငျြတယျဆိုဂြုံအနုမှုနျ့ ကောငျးတာပေးပါလား??? ပိုကျဆံပေးပါလားပျေါပငျလုပျတာ ဘာလား ညာလားနဲ့…”မကောငျးဘူးထငျပွီး သှားမယူခဲ့ကွသူတှလေညျးမြားစှာရှိခဲ့ကွသတဲ့။
သို့သျောတဈကယျစားရမဲ့ သောကျရမဲ့အတိဒုက်ခရောကျနတေဲ့သူတှကေတော့သှားယူသတဲ့။စားစရာမရှိလို့ ဂြုံမှုနျ့ထုပျလေးတှေ သယျပွီး အိမျ ပွနျရောကျပူရီတို့ ခြာပါတီတို့ မုနျ့လုပျဖို့အိပျကို ဖှငျ့လိုကျခြိနျမှာ(အိပျထဲမှဂြုံမုနျ့အကွားမှာ)ရူပီး ၁၀၀၀၀(နှဈသိနျးခနျ့)သခြောစှာထညျ့ထားပေးတာကိုဂြုံအိတျသှား ယူသူတှရေရှိသှားခဲ့ပါသတဲ့။လူတှကေလညျး တအံတဩနဲ့ဂြုံအိတျမယူလိုကျကွတဲ့ သူတှကေလညျး မခြိတငျကဲဖွဈ တောကျတဈခေါကျခေါကျဖွဈပွီး မငျးသားကွီးကိုဘာကွောငျ့အဲ့ဒီလိုလုပျတာလဲမေးတော့–
မငျးသားကွီးက တဈခှနျးပဲပွနျအဖွမှော လောဘကွီးသူတှမေကျြနှာပကျြသှားကွရသတဲ့။
မငျးသားကွီး ဖွလေိုကျပုံက….“#တကယျကို လိုအပျသူတှရေစခေငျြတာပါတဲ့ ”ဘယျလောကျမြား ကွညျနူးစရာကောငျးလိုကျသလဲ…။
#ပွနျလညျမြှဝပေါသညျ ။မတ်ေတာဖွငျ့ အညတရ ရဟနျးမန်တလေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ကြီးမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးက သိတဲ့Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးအမီးရ်ခန်း(Aamir Khan) နေထိုင်သတဲ့။
သူက အရမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုပဲ။ အခုလို Covid ကာလမှာ သူကလူတွေကို ကြေငြာသတဲ့။သူ ဂျုံကြမ်းအထုပ်ကလေးတွေအများကြီးထုပ်ထားတယ် ၊လာယူကြပါလို့ ပြောသတဲ့။မြို့နေလူထုကလည်း အံဩသွားပြီးဝေဖန်မှု့တွေမြင့်တက်လာ သတဲ့
” ဒီလောက်ချမ်းသာတာဂျုံကြမ်းမှုန့်ပဲပေးတာလား?စေတနာမကောင်းဘူး…ပေးချင်တယ်ဆိုဂျုံအနုမှုန့် ကောင်းတာပေးပါလား??? ပိုက်ဆံပေးပါလားပေါ်ပင်လုပ်တာ ဘာလား ညာလားနဲ့…”မကောင်းဘူးထင်ပြီး သွားမယူခဲ့ကြသူတွေလည်းများစွာရှိခဲ့ကြသတဲ့။
သို့သော်တစ်ကယ်စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့သွားယူသတဲ့။စားစရာမရှိလို့ ဂျုံမှုန့်ထုပ်လေးတွေ သယ်ပြီး အိမ် ပြန်ရောက်ပူရီတို့ ချာပါတီတို့ မုန့်လုပ်ဖို့အိပ်ကို ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ(အိပ်ထဲမှဂျုံမုန့်အကြားမှာ)ရူပီး ၁၀၀၀၀(နှစ်သိန်းခန့်)သေချာစွာထည့်ထားပေးတာကိုဂျုံအိတ်သွား ယူသူတွေရရှိသွားခဲ့ပါသတဲ့။လူတွေကလည်း တအံတဩနဲ့ဂျုံအိတ်မယူလိုက်ကြတဲ့ သူတွေကလည်း မချိတင်ကဲဖြစ် တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီးကိုဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာလဲမေးတော့–
မင်းသားကြီးက တစ်ခွန်းပဲပြန်အဖြေမှာ လောဘကြီးသူတွေမျက်နှာပျက်သွားကြရသတဲ့။
မင်းသားကြီး ဖြေလိုက်ပုံက….“#တကယ်ကို လိုအပ်သူတွေရစေချင်တာပါတဲ့ ”ဘယ်လောက်များ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်သလဲ…။
#ပြန်လည်မျှဝေပါသည် ။မေတ္တာဖြင့် အညတရ ရဟန်းမန္တလေး
အမွငျအာရုံခြို့တဲ့သူ က The Money Drop Myanmar မှာ သိနျး ၂၀ ဆှတျခူးရရှိပွီး စံခြိနျတငျ